PSJTV | ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका चिकित्सकलाई ओलीको खप्की
ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका चिकित्सकलाई ओलीको खप्की
काठमाडौं, २५ असार ।
चिकित्सकहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटी डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षार्थ पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर उनीहरूले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अक्षरशः लागू गर्न पनि माग गरेका हुन् । चिकित्सकहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बिहानै भेटेर जीवन रक्षाका लागि ज्ञापनपत्र बुझाउन चाहे पनि उनले भेट दिएका थिएनन् । ज्ञापनपत्र बुझाउन नपाएको झोंकमा चिकित्सकले सबै प्रकारका सेवा ठप्प पार्ने कडा चेतावनी दिएपछि साँझ प्रधानमन्त्रीले भेट्ने समय दिएका थिए ।
साँझ चिकित्सकको ज्ञापनपत्र बुझे पनि प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो पूर्ववत् अडानमा टसमस नभएको भेटमा सहभागी एकजना चिकित्सकले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए । ओलीले १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने केसीको माग सम्बोधन गर्न नसकिने बताएका थिए ।
ज्ञापनपत्र लिएर गएका चिकित्सकसँग प्रधानमन्त्रीले डा. केसीका माग विपरीतका प्रश्न गरेका थिए– काठमाडौंमा किन मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने ? सम्बन्धन किन नदिने ? नेपाली विद्यार्थी विदेश पढ्न गइरहेका छन्, किन नरोक्ने ? ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठ नेतृत्वमा चिकित्सक टोली साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गएको थियो ।
नौ दिनदेखि अनशनरत डा. केसीलाई मर्न नदिन आग्रह गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले चिकित्सकलाई नै डा. केसीको जिम्मा लिन भनेका थिए । ‘तपाईंहरू नै जीवन बचाउने व्यक्ति हो । मर्न नदिनुस्, बचाउनुस्’, भेटमा सहभागी एक चिकित्सकले प्रधानमन्त्रीालाई उद्धृत गर्दै अन्नपूर्णलाई जानकारी दिएका अन्नपूर्णमा खबर छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चिकित्सक संघका पदाधिकारीलाई कुनै पनि हालतमा बन्द र हड्ताल नगर्न समेत चेतावनी दिएका थिए । ‘उपचार सेवा बन्द गर्न वा हड्ताल गर्न पाइँदैन’, प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै एक चिकित्सकले भने । प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै केसीका माग सम्बोधन गर्न ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिइएको नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो
लगानी भित्र्याउन अर्थमन्त्री डा. खतिवडा वेलायतमा
बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा झार्न सुझाव
बढ्यो रेमिट्यान्स आप्रवाह
निगम यसरी बन्दैछ राष्ट्रिय लज्जावाहक
संसदका कर्मचारीलाई प्रशासनमा आउने बाटो खुला
समायोजन नहुँदासम्म सरुवामा रोक
19th Nov 2018 पिएसजे न्युज
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–४ की १०१ वर्षीया भगवतीदेवी भण्डारीलाई नेपालमै पहिलो राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गरेर वितरण कार्यको शुभारम्भ गर्नुभएको भएको छ । सो अवसरमा गृहमन्त्री थापाले समेत वयोवृद्धा भण्डारीबाट ...
19th Jan 2019 पिएसजे न्युज
काठमाडौं: इलाममा १० दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. केसीलाई शुक्रबार राति ३ बजे त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ल्याइएको छ । स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर हुँदै गएपछि उनलाई हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याई अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना गरिएको ...
22nd Feb 2019 पिएसजे टिभी
-सञ्जिव राई कति बस्नु ढुक्कले थुनेर जिन्दगीलाई सुरक्षाको कैदमा? नपुङ्सक लोग्नेको सुनको पलङझैँ लाग्छ सुरक्षा त जिन्दगीलाई सधैँ आतुर रहन्छ हरबखत ऊ स्वतन्त्रताको बलिष्ठ भूजामा बेरिनकालागि संकटको जस्तै भेलमापनि सङ्लो संयम बगिरहन चाहन्छ जिन्दगी डराउँदैन कहिल्यै ऊ झर्नालेझैँ झ्वाम्म हामफाल्न संघर्षका कठोर ...